Ibali Lobomi: Iintsikelelo Zokwenza Into UYehova Athi Siyenze | UOlive Matthews
Siyasikelelwa Xa Sisenza Into UYehova Athi Masiyenze
Kubalisa uOlive Matthews
“Siza kuyenza loo nto!” Mna nomyeni wam, nobhuti nomkakhe, satsho njalo xa sanikwa isabelo. Yintoni eyasenza savuma, ibe uYehova wasisikelela ngantoni? Makhe ndinibalisele ngemvelaphi yam kuqala.
NDAZALWA ngo-1923 eHemsworth, idolophu eseYorkshire, eNgilani. Yayindim nobhuti, uBob, kuphela abantwana. Xa ndandipha kwiminyaka esithoba, utata owayebacaphukela abantu abazenza ngathi bayakholwa, wafumana iincwadi ezazibhenca unqulo lobuxoki. Wayithanda kakhulu into awayifunda kwezo ncwadi. Kwiminyaka embalwa emva koko, kwafika uBob Atkinson ekhaya waza wadlala intetho erekhodiweyo kaMzalwan’ uRutherford. Saqonda ukuba yayivela kwakulaa nkonzo yayibhale eza ncwadi! Abazali bam bacela uMzalwan’ uAtkinson ukuba aze kutya ekhaya qho ngeengokuhlwa ukuze aphendule imibuzo emininzi yeBhayibhile esasinayo. Wasimema ukuba siye kwiintlanganiso ezaziqhutywa kwikhaya lomzalwana elalikufutshane. Saya ngoko nangoko, ibe kwabakho ibandla elincinci eHemsworth. Kungekudala abazalwana ababetyelela amabandla (ngoku ababizwa ngokuba ngabaveleli besiphaluka) babefikela ekhaya, ibe sasithanda ukumema noovulindlela abakufutshane. Baba nefuthe kakhulu kum.
Ekhaya sasisandul’ ukuvula ishishini, kodwa utata wathi kubhuti, “Hamba uyokuba nguvulindlela, siza kulivala.” UBob wavuma, wahamba wayokuba nguvulindlela eneminyaka eyi-21. Kwiminyaka emibini emva koko, xa ndandina-16, ndaba nguvulindlela. Ngaphandle kwangeempela-veki ndandisebenza ndedwa amaxesha amaninzi ndisebenzisa ikhadi lokunikela ubungqina negramafoni. Kodwa uYehova wandisikelela ngesifundo esenza inkqubela ngokukhawuleza. Ekugqibeleni abaninzi kwintsapho yaloo sisi bayamkela inyaniso. Kunyaka olandelayo, mna noMary Henshall saba ngoovulindlela abakhethekileyo. Kwathiwa masiye kwintsimi engabelwanga bani eCheshire.
IMfazwe Yehlabathi II yayisele iqalile, ibe kwathiwa abafazi mabenze imisebenzi eyayixhasa imfazwe. Ngenxa yokuba sasingabashumayeli, thina boovulindlela abakhethekileyo sasicinga ukuba sasiza kuvunyelwa singayenzi njengabashumayeli bezinye iinkonzo. Kodwa iinkundla zange ziyivume loo nto, ngoko ndagwetywa iintsuku eziyi-31. Kunyaka olandelayo, xa ndandina-19, ndabhalisa kuluhlu lwabantu abangavumiyo ukuya emkhosini ngenxa yezazela. Ndamangalelwa kabini ezinkundleni, kodwa qho lalichithwa ityala. Kuyo yonke loo nto ndabona ukuba umoya oyingcwele uyandinceda nokuba uYehova undibambe ngesandla, endiqinisa kwaye endomeleza.—Isa. 41:10, 13.
NDAFUMANA UMNTU ENDANDIZA KUSHUMAYELA NAYE
Ndadibana noArthur Matthews ngo-1946. Wayesandul’ ukuphuma entolongweni emva kokuba wayebanjwe iinyanga ezintathu ngenxa yokungafuni ukuya emfazweni. Emva koko waba nguvulindlela okhethekileyo nomninawa wakhe uDennis eHemsworth. Utata wabo wabafundisa ngoYehova besabancinci kakhulu yaye babhaptizwa, uArthur ena-17, uDennis yena ena-16. Kungekudala emva koko, uDennis wathunyelwa eIreland, ngoko uArthur washiyeka yedwa. Abazali bam bayithanda indlela lo mfana unguvulindlela owayekhuthele nowayenembeko ngayo, baza bamcela ahlale nabo. Xa ndisekhaya, mna noArthur sasiye sihlambe izitya emva kokuba kutyiwe. Saphela sibhalelana iileta. Ngo-1948, uArthur waphinda wagwetywa ezinye iinyanga ezintathu. Satshata ngoJanuwari 1949, sizimisele ukuhlala kwinkonzo yexesha elizeleyo kangangoko. Sakwazi ukuqhubeka singoovulindlela kuba uYehova wasisikelela, ibe nathi seza necebo lokwenza imali ngokusebenza kwifama yeziqhamo xa sikwikhefu.
Apha sasiseHemsworth emva komtshato wethu ngo-1949
Emva konyaka, sacelwa ukuba siye eNorthern Ireland, saqala eArmagh saza saya naseNewry, iidolophu ezinamaKatolika amaninzi. Iinkonzo zazisilwa apho, ngoko kwakufuneka silumke xa sishumayela kubantu. Iintlanganiso zaziqhutywa kwikhaya lelinye iNgqina elalikwiikhilomitha eziyi-16 ukusuka kwindawo esasihlala kuyo. Kwakusiza abantu abamalunga nesibhozo. Xa siye salala kula mzi, sasisondlala phantsi size sivuswe ngokutya okumnandi ngosuku olulandelayo. Ndiyavuya kuba ngoku kukho amaNgqina amaninzi phaya.
“SIZA KUYENZA LOO NTO!”
Ubhuti nomkakhe, uLottie, babesele bengoovulindlela abakhethekileyo eNorthern Ireland, yaye ngo-1952 sobane saya kwindibano yesithili eBelfast. Sonke safikela kwikhaya lomnye umzalwana onobubele sihlala noPryce Hughes, owayesisicaka sesebe eBritani ngoko. Ngenye ingokuhlwa sasincokola ngencwadi ethi God’s Way Is Love, eyayibhalelwe abantu baseIreland. UMzalwan’ uHughes wasibalisela ngendlela ekwakunzima ngayo ukushumayela kumaKatolika kwiRiphabliki YaseIreland. Abazalwana babegxothwa kwiindawo ababehlala kuzo kwaye behlaselwa nangabahlali ababethunywe ngabefundisi. UPryce wathi: “Sidinga abantu abatshatileyo abaneemoto, ukuze basasaze le ncwadana kulo lonke elo lizwe.” * Zisuka nje sathi, “Siza kuyenza loo nto!” Asuka apho ke amazwi endiwathethe ekuqaleni kweli bali.
Apha sikunye nabanye oovulindlela, sikhwele isithuthuthu esinendawo yokukhwela ecaleni
Enye yeendawo ababedla ngokuhlala kuzo oovulindlela eDublin kukwaMam’ uRutland, udade owayeneminyaka esenyanisweni. Emva kokuba sihleli apho ithutyana saza sathengisa izinto zethu, sobane sakhwela isithuthuthu sikaBob esasinendawo yokukhwelisa umntu ecaleni sayokhangela imoto. Safumana imoto endala ekwimeko entle, saza sacela umthengisi wayo ukuba ayise apho sasihlala khona kuba sasingakwazi ukuqhuba. Ngaloo ngokuhlwa uArthur wayehleli ebhedini eprakthiza indlela aza kuyiqhuba ngayo. Ngentsasa elandelayo, xa wayesazama ukuyikhupha egaraji, kwafika umthunywa wevangeli, uMildred Willett (owatshata noJohn Barr). Kwathi kanti uyakwazi ukuqhuba! Wasifundisa ukuqhuba ibe emva koko sasiwulungele umsebenzi!
Le yimoto nekharavani yethu
Ngoku sasikhangela iindawo esasiza kuhlala kuzo. Sasilunyukisiwe ukuba singahlali kwiikharavani kuba zazinokutshiswa ngabantu abachasayo, ngoko sakhangela indlu kodwa zange siyifumane. Ngobo busuku sobane salala emotweni. Ngemini elandelayo, safumana uzenzele wekharavani owayeneebhedi ezincinci ezimbini. Yaba likhaya lethu ke elo. Sothuswa kukuba amafama anobubele asivumele ukuba siyipake kwiifama zawo. Sasishumayela kumhlaba owawukwiikhilomitha eziyi-16 ukuya kweziyi-24 ukusuka apho sasihlala khona. Emva koko sasibuya sishumayele kwindawo esasihlala kuyo.
Sashumayela kuwo wonke umzantsi-mpuma welo lizwe singafumananga zingxaki, saza sahambisa iincwadi eziyi-20 000, sadlulisela namagama abantu abanomdla kwisebe laseBritani. UYehova wawusikelela lo msebenzi kuba ngoku kukho amaNgqina amaninzi apho!
SABUYELA ENGILANI SAZA SAYA ESKOTLANI
Emva kwexesha, kwathiwa masiye kumazantsi eLondon. Emva kweeveki ezimbalwa, uArthur wafowunelwa lisebe laseBritani limcela ukuba aqale esiphalukeni ngosuku olulandelayo! Emva kokuba siqeqeshwe iveki sahamba saya esiphalukeni eSkotlani. UArthur zange afumane nexesha elaneleyo lokulungiselela iintetho zakhe, kodwa yandikhuthaza kakhulu into yokuba avume ukwenza nantoni na efunwa nguYehova. Kwakumnandi nyhani esiphalukeni. Sasineminyaka eliqela sikwintsimi engabelwanga bani, kodwa ngoku kwakuyintsikelelo nyhani ukuba kunye nabazalwana noodade abaninzi.
Ngo-1962 uArthur wabizwa kwiSikolo SaseGiliyadi esasiza kuthatha iinyanga ezilishumi. Kwafuneka senze isigqibo esinzima. Savumelana ukuba uArthur aye, nangona mna ndandiza kushiyeka. Ekubeni ngoku wayengazukubakho, kwathiwa mandibuyele eHemsworth ndibe nguvulindlela okhethekileyo. Xa uArthur wabuya emva konyaka waba ngumveleli wesithili saza saya eSkotlani, kumantla eNgilani naseNorthern Ireland.
SAFUMANA ESINYE ISABELO EIRELAND
Ngo-1964 uArthur kwathiwa makabe sisicaka sesebe kwi-Irish Republic. Sasiwuthanda nyhani umsebenzi wokuhambahamba, ngoko ekuqaleni ndandingayiginyi ncam le nto. Kodwa ngoku, ndivuya nyhani kuba ndanikwa le nyhweba yokukhonza eBheteli. Ndiyabona ukuba xa uvuma ukwenza umsebenzi owunikwe nguYehova nokuba awuwuthandi, uza kukusikelela. Ndandisebenza eofisini, ndipaka iincwadi, ndipheka kwaye ndicoca. Sakhe saya nakumsebenzi wesithili ibe sabona abazalwana kulo lonke ilizwe. Loo nto nokubona izifundo zethu zisenza inkqubela, kwasenza sasondelelana nabazalwana noodade baseIreland. Sasikelelwa nyhani!
UKUTSHINTSHA KWEZINTO KUBAZALWANA BASEIRELAND
Indibano yezizwe ngezizwe yokuqala eIreland yaba seDublin ngo-1965. * Nangona sasichaswa ngabaninzi, le ndibano yaba semagqabini. Kweza abantu abayi-3 948, kwaza kwabhaptizwa abayi-65. Wonk’ umntu owamkela ezo ndwendwe ziyi-3 500 zisuka kwamanye amazwe wafumana ileta embulelayo. Nabantu ezazifikele kubo iindwendwe bazincoma. Loo ndibano yazitshintsha izinto eIreland.
Apha uArthur wayebulisa uNathan Knorr xa wayefika kwindibano ka-1965
Apha uArthur ukhulula Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile ngolwimi lwamaGael, ngo-1983
Ngo-1966 amabandla akumntla nomzantsi weIreland adityaniswa aba phantsi kweofisi yesebe yaseDublin, nangona abantu behlabathi bezo ndawo babengafuni kubonana. Sasivuyiswa kukubona amaKatolika amaninzi esamkela inyaniso yaye enqula nabazalwana babo ababekade bengamaProtestanti.
SIFUMANA ISABELO ESAHLUKE MPELA
Ubomi bethu batshintsha mpela ngo-2011, xa isebe laseBritani ladityaniswa nelaseIreland saza sathunyelwa kwiBheteli yaseLondon. Le nto sayixelelwa ngexesha endandikhathazeke ngempilo ka-Arthur. Wayenesifo esibizwa ngokuba yiParkinson’s. NgoMeyi 20, 2015 umyeni wam wasweleka emva kweminyaka eyi-66 sitshatile.
Kule minyaka imbalwa idlulile, bendisentlungwini engathethekiyo ngenxa yokusweleka kwakhe, ibe loo nto yade yandigulisa nam. Kaloku ndandiqhele ukuxhaswa nguArthur. Andisamkhumbuli nje! Kodwa xa uneengxaki ezinje ngezi uye usondele ngakumbi kuYehova. Ndivuyiswa kukubona ukuba uArthur wayethandwa. Ndiye ndabhalelwa ngabazalwana noodade baseIreland, baseBritani nabaseMerika. Ezo leta kunye nokukhuthazwa ngumninawa ka-Arthur, uDennis, nomkakhe, uMavis, nabantwana bakabhuti, uRuth noJudy, kundincede kakhulu.
Esona sibhalo siye sandikhuthaza nguIsaya 30:18. Sithi: “UYehova uya kuhlala elindele ukunibabala, aphakame ukuze anenzele inceba. Kuba uYehova nguThixo wokugweba. Banoyolo bonke abo bahlala bemlindele.” Kuyandithuthuzela ukwazi ukuba uYehova ulinde ngomonde ukuze alungise iingxaki zethu aze asinike izabelo ezivuyisayo kwihlabathi elitsha.
Xa ndicinga ngobomi bethu, ndiyabona ukuba uYehova uye wawukhokela waza wawusikelela umsebenzi eIreland! Ndiyavuya kuba ndiye ndanenyhweba yokuncedisa kolo lwando. Ngokwenene akuxokwa xa kusithiwa siyasikelelwa xa sisenza into uYehova athi masiyenze.
^ isiqe. 12 Kuyathethwa ngeli bali kwiNcwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-1988, iphe. 101-102.
^ isiqe. 22 Funda iNcwadi Yonyaka Ka-1988, iphe. 109-112.